पादरीले ३० जना बालिकालाई गरेका थिए बलात्कार– ८ वर्षीया बालिकालाई समेत शिकार बनाउँथे !
काठमाडौं/एजेन्सी । करीब ३० जना बालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोपमा पूर्व पादरीको कतुर्त खुलासा भएको छ । डेली मेलमा छापिएको एक रिपोर्टका अनुसार, पादरीले केही दशक अघि ८ वर्षीया बालिकालाई समेत बलात्कार गरेका थिए । जहाँ ती यौन पिपासु पादरीले ८ वर्षीया अबोध बालिकाले बान्ता नगरुञ्जेलसम्म सम्भोग गरिरहन्थे ।
बेलायती सांसदहरु ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा देखिन थाले
लण्डन । बेलायतकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको सरकारले ब्रेक्जिट (यूरोपली संघबाट हुने बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रिया) लाई केही लम्ब्याउने बिषयमा निर्णय लिन आगामी हप्ता गरिने भनिएको संसको मतदानलाई तत्काल नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एक महिलाले श्रीमानको लागि बनाइन् प्राइभेट भिडियो, तर लिक भएर २० वर्षीय छोराकहाँ पुग्यो !
काठमाडौं/एजेन्सी । एक महिलाको आफ्नै गल्तीको कारण आफ्नै एक्स रेटेड भिडियो दुई हजार भन्दा बढी मानिसमाझ लिक भएको छ । यति मात्रै होइन ती महिलाको आफ्नै छोराको फेसबुकमा समेत सो भिडियो सेयर भएको छ । यसै कारण ती महिलाकी छोरा लाजले आफ्नो घर समेत जानका सकेका छैनन् ।
गोवाका मुख्यमंत्री एवं भाजपाका वरिष्ट नेता मनोहरको निधन
नयाँदिल्ली । भारतको गोवा राज्यका मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ट नेता मनोहर पर्रिकरको आइतबार ६३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले ट्ववीट गरी मनोहरको निधन भएको जानकारी दिएका हुन् ।
आँधीका कारण ३१ को मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता
हरारे, जिम्बाब्वे । जिम्बाब्वेको पूर्वीक्षेत्रमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुगेको यहाँका अधिकारीले शनिबार जनाएका छन् ।
भारतमा चुनावको सरगर्मी बढ्दै, उम्मेदवार छान्न भाजपाको बैठक
नयाँदिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले आसन्न निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छान्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बोलाएको छ ।
मेक्सिको । मेक्सिकोमा फेरि एकजना पत्रकारको हत्या भएको समाचार छ । शनिबार ती पत्रकारलाई आफ्नै घरमा गोली हानी हत्या गरिएको अधिकारीले जनाएका छन् ।